Kuzoba yintokozo yodwa kwi-Annual 032 Picnic | Eyethu News
Kuzoba yintokozo yodwa kwi-Annual 032 Picnic
“Abantu baKwaDukuza abakhululeke ubumnandi busazoba khona.”
U-DJ Sox uzobe enandisa kwi-032 Picnic KwaDukuza
Imbiza izobe izwiwa ngothi edolobheni laKwaDukuza ngoMgqibelo womhla zingu-26 ku-November 2016, njengoba kuzoba ne-Annual 032 Picnic okokuqala ngqa.
Kulindeleke ukuthi izingwazi ezaziwayo kwezomculo zinandise kuleli dili lomculo, nelizoba se-KwaDukuza Bird Sanctuary Park, ngasesiteshini sokuthola izincwadi zokushayela endaweni yase-Stanger Heights.
Ngokusho kwabagqugquzeli baleli dili, phakathi kwezihlabani zomculo ezizonandisa kubalwa u-Fistaz Mixwell, DJ Sox (bonke okungabe-Durban’s Finest), DJ Vumar we Gagasi FM, DJ Feel, kanye no-DJ Mpilo wakhona KwaDukuza kanye abanye abaningi.
Abagqugquzeli, nokuyinkampani eyaziwa ngele-Simmy Weddings and Events, ithi lokhu kuyisiqalo nje, njengoba kusenezinhlelo zokuthuthukisa izinga lezokuzithokozisa endaweni yaKwaDukuza namaphethelo.
“Le picnic yezomculo kuzobe kungeyokuqala ngqa endaweni yaKwaDukuza. Sinohlelo lweminyaka eyimihlanu lokuletha injabulo efana nalena, ngakho-ke sithi nje kubantu baKwaDukuza abakhululeke ngoba ubumnandi kusazoba yinto ezoqhubeka kule ndawo,” kubeka le nkampani esitatimendeni esithunyelelwe iphephandaba i-iLembe Eyethu.
Abagqugquzeli bathi indawo yokupaka kulabo abazobe behamba ngezimoto zabo izobe iyinala njengoba izimto zizobe zipaka mahhala kwindawo yokupaka izimoto ephephile eyaziwa ngele-Victoria Parking nemaphakathi nedolobha laKwaDukuza ngase-Checkers Centre. Labo abazobe bephethe amathikithi bazobe sebethuthwa yizinto zabagqugquzeli sebeyiswa endaweni ye-picnic. Kuzobuye kube khona indawo yokuthengisa ngokuya ngasethunjini kanti labo abazohambela leli dili bayaziswa ukuthi bangafika nama-camping chairs abo, kanye nama-cooler boxes. Nokho bayanxuswa labo abazophatha okuphuzwayo ukuthi baphathe ama-cans kuphela, kwazise amabodlela ngeke evaunyelwe endaweni yedili.
Kuthiwa umcimbi lona uzoqala ngehora leshumi ekuseni ngoMgqibelo (26 November) uze uphele phakathi kwamabili. Amathikithi ayatholakala ezitolo zakwa-Shoprite (Computicket). Abagqugquzeli bathi awekho amathikithi azotholakala emasangweni ngosuku lwe-picnic.